Homeसमाचारकोराना भाइरसको सं’क्रमणबाट नेपाल प्रहरीका असईको दु:खद नि’धन
May 17, 2021 admin समाचार 1090
कोराना भाइरसको संक्र’मणबाट नेपाल प्रहरीका एकजना सहा’यक निरीक्षक (असई) को मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश दंगा नि’यन्त्रण गण सु’नवलमा दरबन्दी रही जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा कार्यरत असई शम्भुलाल दमाईको का’रोना संक्रम’णबाट मृ’त्यु भएको हो।
४५ वर्षका असई दमाईमा वैशाख २६ गते कोरोना भाइरसको संक्र’मण पुष्टि भएको थियो। कोरोनाको संक्र’मण देखिएपछि उनी प्रहरी चौकी चारपाल गुल्मीको भव’नमा सेल्फ आइ’सोलेसनमा बस्दै आएका थिए।
सेल्फ आइ’सोलेसनकै क्रममा रहेका बेला स्वास प्रस्वासमा सम_स्या भएपछि उनलाई आइतबार राति १० बजे जिल्ला अस्पताल तम्घास पु’र्‍याइएको थियो। अस्पताल पुर्‍या’इएलगत्तै डाक्ट’रले उनलाई मृ’त घो’षित गरेका थिए।
यो पनि, कोरोनाबाट वडाध्यक्षको नि&धन
कोरोना सङ्क्र’मणबाट दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर चौधरीको ६३ वर्षका उमेरमा नि’धन भएको छ । नेपालगञ्जस्थित कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उप’चारका क्रममा उहाँको आज नि’धन भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता वीरबहादुर ओलीले जा’नकारी दिनुभयो ।
कोरोना सङक्र’मबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १३ का वडा सदस्य केशरलाल चौधरीको निध’न भएको छ । होम आइसोलेशनमा नै उहाँको गएराति नि’धन भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी कोनाबाट नै बबई गाउँपालिका वडा नं ४ का लक्ष्मण बस्नेतको नि’धन भएको छ । पत्रकार म’हासङ्घ दाङका सदस्य समेत रहेका उहाँको भैरहवा युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचा’रका क्रममा आज अपराह्न निध’न भएको हो ।
रेडियो हापुरेमा का’र्यरत उहाँले गतहप्तामात्र कोरोनालाई परा’जित गर्नुभएको स्टेशन म्यानेजर प्रेमबहादुर राम्जाले जा’नकारी दिनुभयो । जिल्लामा कोरोनाबाट दुई पत्रका’रको नि’धन भैसकेको छ । यस अघि पत्रकार दामोदर अधिकारीको कोरो’नाकै कारण नि’धन भएको थियो । आइतबार मात्रै पत्रकार बस्नेतका पिता टोपबहादुर बस्नेतको पनि सोही मेडि’कल कलेजमा उपचारका क्रम’मा कोरोनाबाट नि’धन भएको थियो । उहाँ नेकपा( एमालें) जिल्ला नेता हु’नुुहुन्थ्यो ।
जिल्लाका एक सङ्क्र’मितका बाँकेमा नि’धन भएको छ । भेरी अस्पतालमा उपचा’रमा क्र’ममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १० का ३८ वर्र्षीया महिलाको गए राति नि’धन भएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीले जान’कारी दिनुभयो । इताजा खबरबाट
April 24, 2021 admin समाचार 1463
April 17, 2021 admin समाचार 1801
August 18, 2020 admin समाचार 17272
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (194076)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (186676)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (186200)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (186139)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (184298)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (184081)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (182642)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (181735)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (175330)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (151930)